Man United Oo Guul Ay Qalantay Ka Gaadhay Brighton, Bruno Fernandes Oo Wacdaro Dhigay & Red Devils Oo Soo Yaraysay Dhibcaha Kaalinta 4-aad. – Kooxda.com
HomePremier LeagueMan United Oo Guul Ay Qalantay Ka Gaadhay Brighton, Bruno Fernandes Oo Wacdaro Dhigay & Red Devils Oo Soo Yaraysay Dhibcaha Kaalinta 4-aad.
Man United Oo Guul Ay Qalantay Ka Gaadhay Brighton, Bruno Fernandes Oo Wacdaro Dhigay & Red Devils Oo Soo Yaraysay Dhibcaha Kaalinta 4-aad.
Kooxda Man United ayaa guul dhinac kaliya ahayd oo ay u qalmeen ka gaadhay kooxda Brighton kulan ka tirsanaa premier League iyaga oo cadaadiska sii saaray kooxda chelsea ee kaalinta 4-aad ku jirta.
Red Devils ayaa kulanka ku bilaabatay si maamul leh iyaga oo kubada si fiican uga haystay kooxda Brighton kuwaas oo aan soo bandhigin qaab ciyaareedkii laga filayay.
Xiddiga khadka dhexe ee Bruno Fernandes oo ahaa xiddiga garoonka ayaa bilaabay in uu kubado gaa-gaaban ka daba saaro daafacyada kooxda Brighton laakiin waxa ka hor istaagay xiddigaha kooxda Brighton.
10-kii daqiiqo ee ugu horaysay Man United ayaa kubad haysashada gaadhiisay 73% iyaga oo Brighton u diiday in ay ciyaaraan kubado rogaal celis ah oo ay ku halis galiyaan Goolkeeda.
Daqiiqadii 16-aad ayay Man United dhalisay goolka 1-aad ee ciyaarta iyaga oo uu si qurux badan ugu dhaliyay xiddiga Mason Greenwood kaas oo hogaanka u dhiibay kooxdiisa kana dhigay ciyaarta 1/0
Kooxda Man United ayaa sii waday maamulista ciyaarta iyo sidoo kale samaynta fursadaha ay ku doonayso in ay goolasha ku sii dheeraysato.
Kadib dadaalka badan iyo fursado fiican oo ay sameeyeen Man United ayaa daqiiqadii 29-aad dhalisay goolka 2-aad ee ciyaarta iyaga oo uu u dhaliyay xiddiga Bruno Fernandes kaas oo ciyaarta ka dhigay 2/0.
Kadib goolkaas Mna United ayaa u muuqatay kuwo hoos u dhimay dadaalkii kubad haysashada iyaga oo qaadayay weeraro rogaal celis ah waliba Brighton u ogolaaday in ay haysato kubada inkasta oo ay wali ka kubad haysasho badnaayeen.
Waxa sidaas ku dhamaatay Qaybtii hore ee ciyaarta oo ay Man United soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah una awood sheegatay kooxda Brighton kuwaas oo aan si fiican u ciyaarin.
Qaybtii dambe ayay Man United ku bilaabatay si xamaasad leh iyaga oo qaadayay weeraro halis ah oo ay ku doonayeen goolal kale.
Daqiiqadii 50-aad ayay man United sii dheeraystatay hogaanka ciyaarta iyaga oo uu gool u dhaliyay xiddiga Bruno Fernandes kaas oo sidaas ku dhaliyay goolkiisii 2-aad ee ciyaarta.
Qaybtii dambe kooxda Brighton ayaa u muuqatay kuwo ka halis badan sidii qaybtii hore iyaga oo samaynayay fursado cajiib ah laakiin waxa ka maqnayd dhamaystirka iyaga oo kubada dhaafin waayay Goolhaye De Gea.
Dhanka kale Man United ayaa heshay fursado halis ah oo ay ugu weynaayeen fursadihii Daniel James iyo waliba xiddiga khadka dhexe ee Scott McTominay.
Waxa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ay Man United gaadhay guul ay u qalantay mar kalena ku muujisay awoodeeda ay ugu soo bixi karto champions League xilli ciyaareedka dambe.